यी सबै बच्चाको पिता म नै हुँ, गर्भवती ६ महिला लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले भने ! - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा यी सबै बच्चाको पिता म नै हुँ, गर्भवती ६ महिला लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले भने !
यी सबै बच्चाको पिता म नै हुँ, गर्भवती ६ महिला लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले भने !
एजेन्सी यी सबै बच्चाको पिता। कुनै पनि पुरुषले एक पटकमा एकजना महिलालाई गर्भवती बनाउन सक्छ र त्यो गर्भको बच्चा मेरो हो भन्न सक्छ । एकै पटकमा ६ जना महिलालाई गर्भवती बनाउन कुनै पुरुषले सक्दैनन् । तर नाइजेरियाका प्रिटी माइक नामक गरेका एक पुरुषले आफुले ६ जना महिलालाई एकैपटक गर्भवती बनाएको बताएका छन् ।